XOG: Shariif oo fur furaya dabinta Fahad Yaasiin u dhigay Hirshabeelle & qorshihiisa doorashada | SMC
Home WARARKA MAANTA XOG: Shariif oo fur furaya dabinta Fahad Yaasiin u dhigay Hirshabeelle &...
XOG: Shariif oo fur furaya dabinta Fahad Yaasiin u dhigay Hirshabeelle & qorshihiisa doorashada
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo Jowhar kulamo ka wada ayaa doonaya in Kursiga ugu sareeya Hirshabeelle aysan u tartamin Beesha Abgaal oo loo daayo Beesha Xawaadle oo horay xilka u heysay.
Qorshahan uu damacsan Shariif ayaa u cuntameyn Villa Soomaaliya iyo musharax madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen oo loo saadaalinayo inuu xilkan hantinayo maadama loo xaglinayo dhanka Madaxtooyada Soomaaliya.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya hadana ah guddoomiyaha madasha Xisbiyada Qaran Sheikh Shariif ayaa u bandhigay duubabka dhaqanka Hirshabeelle iney ka soo qeyb galaan gogol dib u heshiineed uu dhigayo magaalada Muqdisho.
“Waxaan idinka codsanayaa in dib u heshiin la dhex dhigo beelaha dega Hirshabelle kahor inta aan la galin doorashada Hirshabele.”ayuu yiri SHeekh Shariif Sheek Axmed.
Sidoo kale Shariif Sheekh Axmed ayaa la kulmay Siihayaha Madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen iyadoo kulankooda uu ahaa mid albaabada u xirnaa.
Shariif Sheekh Axmed ayaa wararku ay sheegayaan inuu doonayo in xilka Madaxweynaha Hirshabelle aysan u tartamin beesha Abgaal loona daayo beesha Xawaadle.
Taliyaha Nabad sugida Soomaaliya Fahad Yaasiin oo la aamisan yahay inuu ku lug leeyahay dhismaha maamulka Hirshabeelle uuna yahay shaqsiga dhalan roga maamulka ayaa suurta gal ay tahay inuu ka biyo diido qorshaha madaxweyne Sheikh Shariif uu ka wado magaalada Jowhar.
Xubnaha wafdiga la socda Sheekh Shariif ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo uu ka mid yahay Maxamed Ibraahin Xasan”Qoone” oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo hore u sheegay inuu yahay Musharax madaxweynaha Hirshabelle.
Next articleBeesha Dir oo go’aan ka soo saartay Doorashada Somalia, (Maareeye & F/Waraabe oo ka muuqday)